Maalintii taariikhiga ahayd ee 121212 iyo Hargeysa | Somaliland Hargeisa City
Maalintii taariikhiga ahayd ee 121212 iyo Hargeysa
12 December, 2012 — somaliland1991
Maantaa oo ay taariikhdu ahayd 121212, ayaa waxa ay ahayd maalin taariikhiya oo dunnida mar kale dib ugu soo noqonayn amaba u soo marayn. Haddaba sidii aynu horeba u soo sheegnay ayey maalintan dad badani siyaabo kala duwan ugu faraxsanaayeen. Dad baa iyagu jeclaa in maalintani noqodto maalin taariikh ku reebta nolashooda. Dad badan oo dunnida ku nool ay maalintani u ahayd maalin ay xasuusan doonaan. Qudhaydu markii ay gaadhay 121212 12:12 waan suntay maalintan, qofba si gaara oo uu jecel yahay ayuu u suntay. Haddaba maalintan sidee ayey dhallinyarada reer Hargeysa maalintan u sunteen. bal aynu eegno wariyaha Hiiraan Online ee Hargeysa jooga, oo ka waramaya sida ay wax uga dhaceen magaalada Hargeysa. Daawo sawirro kale oo ku tusaysa meelaha kale ee dunnida sida maalintan loo suntay.
Hoteladda Magaalada Hargeysa oo Maanta ay buux-dhaafiyeen
Sawirro sida ay maalintan dad badan oo dunnida ku nool ay ku sunteen nolashooda.
Ngawi, Indonesia, Asia
A mass wedding ceremony of 12 couples was held in Bantul, Yogyakarta on the unique, and considered by some, auspicious date of the 12th day of the 12th month, 2012.
Baby wear bracelets inscribed 121212 shortly after birth in hospital Muwardi, Solo, Indonesia. Residents consider the unique date because of the similarity between the date, month and the last two numbers in the form a series of numbers 121212. birthday 121212
Kuala Lampor, Malasiya Bangkok, Thailand
« Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Samsam Cabdi Aadan oo 6 macalin oo hawl-gabay gudoonsiisay 10 kun dollar iyo shahaado sharaf
Faallo: Shacabka dalka Maraykanku diyaar ma u yihiin in qaynuunka wax laga bedelo?? Dad iskugu jira 28 carruur iyo dad waaweyn oo lagu toogtay Newtown Maraykanka, »